တိုးတက်ရေးပါတီတံဆိပ်ခေါင်း - တရုတ် QiDi ပလတ်စတစ်မှို
တိုးတက်ရေးပါတီ, စိုင်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သတ္တုထည်လုပ်ငန်း ပတ်ဝိုင်းနိုင်သောနည်းလမ်း လာကြတယ် , coining , ကွေး ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏အခြားနည်းလမ်းတွေ သတ္တု တစ်ခုအလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးမှုစနစ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကုန်ကြမ်း။
(ကကွိုင်ထံမှ unrolls အဖြစ်) ကိုတိုက်ကျွေးမှုစနစ်တစ်တိုးတက်သောစိုင်းသေ၏ဘူတာအပေါငျးတို့သမှတဆင့်သတ္တုတစ်ခုချွတ်တွန်း။ တစ်ချောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းသည်တိုင်အောင်အသီးအသီးဘူတာရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ နောက်ဆုံးဘူတာထမ်းက်ဘ်ဆိုက်ကနေချောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွဲခြားသော cutoff စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ ယခင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကွာလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ကြောင်းသတ္တုနှင့်အတူတင်ဆောင်က်ဘ်ဆိုက်, အဖြစ်ကုသ အပိုင်းအစသတ္တု ။ နှစ်ဦးစလုံးသွားဖြတ် (သို့မဟုတ်သေထဲက) ကိုချခေါက်ထို့နောက်သေအစုံကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမကြာခဏမြေအောက်အပိုင်းအစပစ္စည်းကနေတဆင့် bins ဖျက်သိမ်းရန်ပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ် ပေါ်ကိုခါးပတ်.
အဆိုပါတိုးတက်သော စိုင်းသေ တစ်ဦးအပြန်အလှန်သို့ထား စာနယ်ဇင်းနေမှုကိုချေဖျက် ။ စာနယ်ဇင်းတက်လှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့, ထိပ်တန်းဦးသေဆုံးပစ္စည်းအစာကျွေးဖို့ခွင့်ပြုသည့်ကလှုံ့ဆော်ပေး။ စာနယ်ဇင်းချလှုံ့ဆျောသောအခါ, သေပိတ်နှင့်နေမှုကိုချေဖျက်စစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ စာနယ်ဇင်းများ၏အသီးအသီးလေဖြတ်မှုနှင့်အတူတစ်ပြီးစီးခဲ့အစိတ်အပိုင်းသေမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အပိုဆောင်းလုပျငနျးသေတစျခုစီ "ဘူတာရုံ" ၌ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအဲဒါကိုဘူတာရုံမှဘူတာမှလှုံ့ဆျောအဖြစ်တစ်ခုလက်မအနည်းငယ်ထောင်အတွင်း aligns နိုင်အောင်ချွတ်အလွန်တိကျစွာချီတက်စေခြင်းအရေးကြီးပါသည်။ ကျည်ဆံ shaped သို့မဟုတ် conical "လေယာဉ်မှူးက" နို့တိုက်ကျွေးရေးယန္တရားပုံမှန်အားဖြင့်အစာကျွေးခြင်းအရှည်အတွက်လိုအပ်သောတိကျစွာပေးမပေးနိုငျကတည်းကဒီ alignment ကိုအာမခံဖို့ချွတ်အတွက်ယခင်ကထိုးဖောက်လှည့်လည်တွင်းရိုက်ထည့်ပါ။
တိုးတက်ရေးပါတီ, စိုင်းကိုလည်းလွှဲပြောင်းပုံနှိပျအပေါ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ "လက်ချောင်းများ" ၏အသုံးပြုမှုကိုအတူလာမယ့်တဘူတာမှအစိတ်အပိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းကြောင်းပုံနှိပျဖြစ်ကြသည်။ အဘို့အ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု ရှုပ်ထွေး In-စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများလိုအပ်လုပ်ပေးထားတဲ့တံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ, တကတိုးတက်သောစာနယ်ဇင်းသုံးစွဲဖို့အမြဲအကြံပြုလိုတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ၏ဤအမျိုးအစားများ၏အားသာချက်များတစ်ခုမှာထုတ်လုပ်မှုသံသရာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းကိုအပေါ်သို့ မူတည်. ဘဏ်ဍာကိုအလွယ်တကူ 800 အစိတ်အပိုင်းများ / မိနစ်ကျော်ကောင်းစွာ run နိုင်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ၏ဤအမျိုးအစားများ၏အားနည်းချက်များကိုတစ်ခုမှာကမြင့်မားသောတိကျဘို့မသင့်တော်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် နက်ရှိုင်းပုံဆွဲ , စိုင်း၏အတိမ်အနက်ကိုအစိတ်အပိုင်းများ၏အချင်းထက်ကျော်လွန်သည့်အခါဖြစ်၏။ ဘယ်အချိန်မှာလိုအပ်သော, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးအမြန်နှုန်းမှာ run ထားတဲ့တစ်ဦးလွှဲပြောင်းစာနယ်ဇင်းအပျေါမှာဖျော်ဖြေနှင့်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းသံသရာစဉ်အတွင်းအရပ်ဌာန၌ component တစ်ခုကိုင်ဖို့စက်မှုလက်ချောင်းများအပေါ်အားကိုးသည်။ အဆိုပါတိုးတက်သောစာနယ်ဇင်း၏ဖြစ်ရပ်မှာဖွဲ့စည်းသံသရာကသာတစိတ်တပိုင်းမှုပေးသောနွေဦးတင်ဆောင်အင်္ကျီလက်သို့မဟုတ်အလားတူဖြင့်ပဲ့ထိန်းနိုင်ပါတယ် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် ဘဲဥပုံ ကိစ္စရပ်များနှင့်မဟုတ်တဲ့ယူနီဖောင်းပစ္စည်းအထူ။ တိုးတက်သောပုံနှိပျ၏အခြားအားနည်းချက်များပုံနှိပျလွှဲပြောင်းရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်: တိုးမြှင့် ကုန်ကြမ်း , အစိတ်အပိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ် input ကိုသူတို့ဘူတာရုံနှုန်းအနည်းငယ်သာလွတ်လပ်သောစည်းမျဉ်းတွေနဲ့လုပ်ကွက်များတွင်လုပ်နေကြသည်ဖြစ်သောကြောင့် tools တွေအများကြီးပိုစျေးကြီးတယ်, အစိတ်အပိုင်းကိုမလိုအပ်သောစာနယ်ဇင်းများတွင်လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင် (, အနားကွပ်ရေခဲပြင်ဒိုးပစ် necking ဥပမာပုတီးဟာချွတ်ထားခဲ့ပါ ချည်ကိုလှိမ့ စသည်တို့ကိုစိုင်း rotary,) ။
အဆိုပါသေဆုံးများသောအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနေကြသည် tool ကိုသံမဏိ , ပါဝင်ပတ်သက်မြင့်စျေးမှာတင်ကိုဆီးတားလိုအပ်သောချွန်ထက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်, နှင့်ခုခံတွန်းလှန်ရန် ပွန်းစားခြင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတပ်ဖွဲ့များ။
အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ကိရိယာတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရန်ထားတဲ့ features တွေ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာနိမ့်ဆုံးမှ tool များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းသော features တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကြံပြုထားသည်။ ကလာကြတယ်အတွက်လုံလောက်သောရှင်းလင်းရေးမပေးစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်အနီးကပ်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များအတူတကွအခြားဘူတာရုံများတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ပြဿနာတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်။ ဒါဟာအစကျဉ်းမြောင်းဖြတ်တောက်မှုနှင့် protrusions ရှိသည်ဖို့ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်တိုးတက်သောသေ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာတစ်ခု၏အဖုံးဖြစ်ပါသည် ဖျော်ယမကာလုပ်နိုင်တဲ့ ။ အဆိုပါဆွဲ tab ကိုတဦးတည်းတိုးတက်သောစိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်အဖုံး & စည်းဝေးပွဲကိုအခြားဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုဆွဲ tab ကိုတစ်ပြိုင်တည်းအဖုံး & စည်းဝေးပွဲကို process ကိုစပိုင်ခွင့်ထောင့်မှာအစာကျွေး။